100-ka maalmood ee Farmaajo: Faarax ka guur ee Fahad u guur Farmaajow lagaa filimeyn | Xaqiiqonews
100-ka maalmood ee Farmaajo: Faarax ka guur ee Fahad u guur Farmaajow lagaa filimeyn
Tan iyo markii la doortay madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullahi Farmaajo Febraayo 8, 2017, waxaa soo if baxayay yididiilo iyo rajo weyn oo aay shacabka Soomaaliyeed ka qabeen in aay helaan dowlad caadil ah oo u damqaneysa danta dalka, dadka iyo diinta, balse rajadaas aay shacabka u sacabo tumeen ayaa noqotay mid waqti gaaban ku dhicisowda, waxaana soo baxay ififaalo aad u xun iyo rajadii dalka oo sii gashay god mugdi ah.
Abwaanka da’da yar Nageeye Cali Khaliif oo deggen magaalada Hargeysa ayaa tix gabay ah u tiriyay Madaxweyne Farmaajo markii la doortay, tixdaas oo uu ugu magac daray “WAXAAN KAAGA DIGAYAA”ayaa waxaa ka mid ahaa erayadaan
“Maxamadow ninkii doona ayuu hadalku deeqaaye damanaha wax uma sheego iyo liida doqoneede waa dood abwaanoo farshaxan laga dareemaaye ujeedada laguu doortay baan kuu dul marayaaye, dadku waxay kuu arkaan nin wax diidi kara dooni kara hadalna deeqsiiya, dhiigiisa ruux daadin kara dirir markay joogto. waa kacdoon dadweynoo muddaba dabaqu saarnaaye
Degdeg iyo fudeed baan kaaga digayaaye. Dullinimo iyo kooxeysi baan kaaga digayaaye danta guud markey joogto iyo dowladnimadeena, hadal Dabacsan iyo liidnimaan kaaga digayaaye
Digniintii iyo tusaaleyntii uu soo jeediyay abwaan Nageeye oo ka tarjumeysay dareenka shacabka meel walbo oo aay Soomaaliya ka joogaan ayaa hadda waxaa aay noqotay mid laga rajo beelay. Weli taariikhda ma dhicin in shacabka gobolada waqooyi aay u damaashaadaan doorasho ka dhacday Muqdisho iyagoo halis u galay in aay xabsi dheer galaan, balse maamulka Hargeysa ayaa markii aay arkeen in shacabkii wada kacay indhaha ka xirtay damaashaadka iyo soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo.
Rajada intaa la ekeyd ayaa muddo ka yar boqol (100) cisho ah ku gashay god mugdi ah oo madow. Abwaan Nageeye ayaad mooda in uu ogaa waxa laga filan karo kaddib doorashadii Farmaajo waayo inta wax ee uu uga digay ayaa durbadiiba soo baxday.
Tan iyo markii la sameeyay dowladdii TNG ee lagu soo dhisay dalka Jabuuti waxaa udub dhexaad u ahaa habsami u socodka dowlad walba oo ka danbeysay ilaa laga doorto bishii febraayo 8, 2017 madaxweyne Farmaajo DIB U HESHIISIIN iyo in la dhowro nidaamka awood qeybsiga. Taas ayaana aasaas u ahayd in seddex jeer madaxweyne la doorto xilkana lagula kala wareego si nabad ah.
Akhristow marnaba shacabka Soomaaliyeed oo baahi weyn u qabay hoggaan ku dhisan caddaalad iyo sinnaan ayaa mar uun waxaa aay shacabka iyo siyaasiyiintaba ka war heleen in dalku laba madaxweyne iyo laba madaxtooyo leeyahay.
Waxaa Muqdisho leysla dhex marayaa (Faarax ka guur ee FAHAD u guur FARMAAJOOW lagaa fili meyn). Waa ayaan darro soo korortay iyo ififaalo afar sano oo khasaaro ku soo wajahan rajada dalka iyo dadkaba.
Waxaa inta badan dadka ku noqotay layaab markii uu Madaxweyne Farmaajo u magacaabay shaqsiyaad isku beel ah seddex jago oo muhiim gaar ah u leh dalka Soomaaliya, Ra’isul wasaare, lataliyaha amniga iyo safiirkii ugu horreeyay. Seddexdan shaqsi ayaa ku beel ah xaaska Madaxweynaha Saynab Macallin.
Madaxweyne Farmaajo markii uu magacaabay RW Kheyre bishii Febraayo 23 waxay hordhac u ahayd in uu dhinac maray nidaamkii awood qeybsiga, shacabka uma aanay riyaaqin soo magacaabida RW Kheyre, balse candhuuftooda ayey dib u liqeen iyagoo weli rajo ka qaba, waxaa xigay magacaabidii golaha wasiirada oo misana si bareer ah loo dhinac maray ilaalinta awood qeybsiga si loo helo nidaam leh hore u socod udub dhexaadna u yahay in la helo dib u heshiisiin dhab ah.
Waxaa ku soo xigtay in Madaxweynaha uu dib misana u magacaabo taliyeyaal ciidan iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, oo haddana uu si bareer ah ugu dhinac maray nidaamkii awood qeybsiga, intaa kuma uusan ekaan ee waxaa fajac iyo amakaag ku noqday shacabka oo aan marnaba fileyn in Farmaajo dib ugu laabto QASHINKII uu tuuray Madaxweyne Xasan Sheekh intii uu xukunka hayay isla markaana shacabka u sheego waxaan idiin keenay isbedel.
Waxaa hubaal ah inta la magacaabay ee kor ku xusan in uu si shaqsi ah oo aan gabasho lahayn u wada magacaabeen RW Kheyre iyo Fahad Yasin, Madaxweyne Farmaajo uu markhaati uun ka ahaa fashilka aay soo dhoodhooben Fahad Yasin iyo Kheyre.
Taa waxaa ka sii daran, Farmaajo wuxuu iclaamiyay dagaal ka dhan ah kooxaha nabadiidka ah isagoo aanan sameysan qorsho dagaal iyo istaraatijiyo rasmi ah oo lagula dagaalo Shabaab.
Ficilada iyo go’aan xumada Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa aay keentay durbaba in amnigii magaalada Muqdisho uu faraha kasii baxo, tan iyo markii la doortay bishii Febraayo 8, 2017 waxaa magaalada muqdisho ka dhacay 34 Qarax waxaana cadowga shabaab aay ku dileen in ka badan 180 qof. Weli taariikhda kama dhiciin in cadawga Shabab aay ku dhiiraadaan in aay fal ismiidaamin ah ka fuliyaan xero ciidan iyagoo maalin ka horna sigay in aay qaarajiyaan taliyaha cusub ee CXS Gen. Jimcaale Cirfiid.
Ka hor doorashada Farmaajo muddo ka badan lix bilood waxaa magaalada ka dhacay lix (6) qarax. Madaxweyne Farmaajo oo haystay kalsoonida ciidamada iyo midda shacabka ayaa durbadiiba la soo baxay weji siyaasadeed oo aan laga fileyn isagoo aay daaha hoostiisa ka maamulayaan kooxda Fahad Yaasiin oo aan qarsan naceybka aay u qabaan dadka Muqdisho deggan. Farmaajo ayaa waxaa uu ku mashquulay shirar amni oo aan miro dhal ahayn iyo shirka u diyaar garowga London oo habeenkiina wakhtigiisa uu ku lumiyo qaabilaad xildhibaano iyo shacab isugu jira caa’ilo iyo siyaasiin xilal doon ah.
Shacab badan oo dib ugu soo noqday Caasimada Muqdisho doorashada kaddib, ama haka yimaadeen gudaha dalka ama dibadda ayaa durbaba bilaabay in aay isaga baxaan Muqdisho. Waxaa faraha ka baxay ammaankii Muqdisho, waxaa joogto noqday qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo maalin walba ka dhaca magaalada Muqdisho.
Waxaa bilowday barakac magaalooyin badan oo ka tirsan gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose, kaddib markii aay bilaabeen ciidanka XDS ee difaaca uga jiray goboladaas in aay ka soo baxaan furimaha dagaalka iyagoo ka biyo diidan go”aanada madaxweyne Farmaajo uu xilalka ciidanka XDS ugu muujiyay kalsooni darro qabyaaladeed isagoo xilalka u dhiibay rag aay caa’ilo qabiil ka dhaxeyso.
Waxaa bilowday hub uruursi iyo in shacabka aay u diyaar garoobaan in aay is difaacaan, mana aha wax laga filaayay Farmaajo.
Muddo ka yar 100 maalmood ayaa waxaa bilaabatay hadal heynta in aay bilaabeen xildhibaanada baarlabaanka shirar gooni gooni ah oo aay kaga tashanayaan sidii aay ka yeeli lahaayeen ayaan darrada la soo deristay kaddib markii aay si aqlabiyad ah ugu codeeyeen madaxweyne Farmaajo oo aay ka sugayeen isbadel, balse aay durbadiiba shacabka bilaabeen dhaliilaha madaxweynaha iyo RW Kheyre. Waxaa la hadal hayaa in fasaxa baarlabaanka kaddib dhammaadka bisha Luulyo iyo bilowga bisha August aay baarlabaanka qaadi doonaan tallaabiyoon xil ka qaadis aay suurto gal tahay in Farmaajo ama Kheyre midkood uu ku waayo kalsoonida labada gole.
Dalka oo aay ka jirto abaaro ba’an ayaanan hadda awoodin in afar sano oo kale aay dib u dhumiyaan waxaana dalka iyo dadkaba aay faa’iido ugu jirtaa inta aay goori goor tahay in in la is daba qabto.
Waxaa inta badan dadka aay rumeysan yihiin in kooxda Fahad Yaasiin aay fulinayaan halkudhigoodii ololaha doorashada oo ahaa (No More Abgaal= Agaal danbe MAYA). Waxaana taa daliil u ah in aay maanta dowladda horboodayaan anshax laawayaashii baraha bulshada la dhex taagna aflagaadada Madaxweynihii hore Xasan Sheekh iyo beesha Muddulood kuwaas aay ka mid yahiin, Xuseen Macallin, Xil. Mustaf Dhuxuloow iyo Cabdiraxmaan Ceynte, Xil Cabdishakuur Cai Mire (Gaal Eri) iyo Fahad Yasin.
Marna Shacabka Isma lahayn Xasan Sheekh Maxamuud WAA LOO DARSAN DOONA
W/Q: Cabdirisaaq Maxamuud Culusow